The thing about Facebook is that no matter which image you upload, it will lower down the quality of it. Asaresult, you often get to seeablurry image. သို့သျောလညျး, this is notabig deal if you are uploading images on your Facebook profile. But when it comes to uploading images for advertisements. It mattersalot.
And to help you out with that, I am going to talk about the Best facebook ad image dimensions သင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်. So let’s just head into the topic without wasting much of the time:
We are going to tell you in detail about how to utilise the images in the best format and give your adaboost to the people of Facebook and gets the attractive engagement.The recommended Facebook Ad size is 1200 x က 628 pixels and width & height should be 600 pixels ကို.
Facebook က Feed တွေကိုကြော်ငြာတွေ
Facebook ကဗွီဒီယိုကြော်ငြာများ Feed
Facebook မှာ Carousel ကြော်ငြာတွေ
In-stream ကိုဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကို Facebook
စျေးကွက် facebook ကဘာလဲ?
Facebook ကိုစျေးကွက်ကြော်ငြာ image ကိုရှုထောင့်
Facebook မှာ Messenger ကိုကြော်ငြာတွေ
Facebook ကိုအစာကျွေးခြင်းကြော်ငြာတွေထွက်အဲဒီမှာပါတဲ့လူသုံးအများဆုံး Facebook မှာ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. တောင်မှကြောင့် FB ရှိကြောင်းရှေးအကျဆုံးကြော်ငြာကို formats တစ်ခုဖြစ်တယ်. တောင်မှသူကအာဏာအရှိဆုံး Facebook ကကြော်ငြာကို formats တစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့် Advertising ၏အတော်လေးတွေအများကြီးအသုံးပြုရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ကြော်ငြာအသုံးပြုသူများ၏ feed ကိုလာအဖြစ်. ထို့ကြောင့်, သင်သည်အသုံးပြုသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ကြော်ငြာရှိသည်ရှိသည်. နှင့်သင့်ပုံရိပ်ကိုအလုံအလောက်မစုံလငျပါလျှင်ထို့နောက်သင်တစ်ဦးပြောင်းလဲခြင်းသို့သင့်ရဲ့ကြော်ငြာပြောင်းလဲရန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်.
Facebook ကိုအစာကျွေးခြင်းကြော်ငြာတွေများအတွက် image ကိုလမ်းညွှန်ချက်အကြောင်းပြောနေတာ. ကောင်းစွာ, အကြံပြုထားတဲ့ image ကိုရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ် 1200 x က 628 pixels ကို. အဖြစ်ပုံရိပ်၏နိမ့်ဆုံး width နဲ့ height ဖြစ်သင့် 600 pixels. အဖြစ်ပုံရိပ်၏နိမ့်ဆုံးအသှငျအပွငျရိက္ခာများအကြားဖြစ်သင့်တယ် 9:16 သို့ 16:9, ဒါပေမဲ့ကောက်ပဲသီးနှံများမှ 1.91:1 link တစ်ခုနှင့်အတူ. Plus အား, အကြံပြုထားတဲ့ image ကိုကို formats JPG နှင့် PNG များမှာ.
Usefull Info : If you love to auto post on Facebook Groups then you should follow ဤဆောင်ပါး.
လည်း, သင့်ရဲ့ add တစ်ခု image ကိုအောင်နေစဉ်အတွင်းသုံးစွဲဖို့သေချာအောင် 20% စာသားသို့မဟုတ်ထက်လျော့နည်း. ထက်ပိုပြီးအဖြစ် 20% စာသားမပျက်ကွက်ပေးပို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်. ကြောင်းအပြင်, ဇာတ်ကောင်ကန့်သတ်အကြောင်းပြောနေတာ. သငျသညျအထိအများဆုံးထည့်နိုင်သည် 125 ဇာတ်ကောင်နှင့်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်သင့် 25 ဇာတ်ကောင်. link ကိုဖော်ပြချက်များအတွက်, သငျသညျအထိအသုံးပြုရမည် 30 ဇာတ်ကောင်.
လာမယ့်ဖွင့်, အဆိုပါ Facebook မှာ Feed ဗွီဒီယိုကြော်ငြာလည်းမရှိ. အပြင် facebook ကိုအစာကျွေးခြင်းကြော်ငြာများမှ, လွန်းက Facebook feed ကိုဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကိုအသုံးပြုဖို့သူကလူမျိုး၏အတော်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်. ပင်, သာ US မှာနေတဲ့အစီရင်ခံစာအဆိုအရ, Facebook မှာဗီဒီယိုကပို့စ်များကိုတိုးကြပါပြီ 94%. ထိုအဟုတ်, Facebook ကအစဗီဒီယို streaming များကွန်ယက်ကိုဦးတည်ရွေ့လျားလျက်ရှိသည်. ဒါကြောင့်သင်လည်း Facebook ကဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကို run ချင်ကြောင်းသိသာဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမယ့် Facebook ကဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကိုအပ်လုတ်မှကြွလာသောအခါ. သငျသညျအသှေးဂရုစိုက်ရမယ်.
ဒီတော့လမ်းညွှန်ချက်အကြောင်းပြောနေတာ, Facebook မှာဗီဒီယိုများအတွက်ထောက်ခံချက်ဖြစ်နိုင်လျှင်ဗီဒီယို၏အမြင့်ဆုံး resolution ကို upload လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. လည်း, နေသမျှကာလပတ်လုံးအတိုင်းအတာစိုးရိမ်နေကြအဖြစ်, သင်အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည် 600 x က 315 (1.9:1 ရှုခင်း) သို့မဟုတ် 600 x က 600 (စတုရန်း). အဆိုပါအကြံပြုအချိုးအကြားဖြစ်ပါသည် 9:16 သို့ 16:9 (ရေပြင်ညီ: 16:9, ရင်ပြင်: 1:1, တည့်မတ်သော: 4:5 သို့မဟုတ် 2:3 နှင့်အပြည့်အဝပုံတူ: 9:16). လည်း, အကြံပြုသည့်ဗီဒီယိုကို formats are.MP4 နှင့် .MOV (ဒီမှာစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှု).
သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်တစ်ဦးအမြင့်ဆုံးတစ်အရှည်၏ 4GB အထိ upload တင်လို့ရပါတယ် 240 မိနစ်များ. ဤသည်မှာသော်လည်း Facebook ကကြော်ငြာတော်တော်လုံလောက်ပါတယ်. ကျွန်တော်တစ်ဦးအများဆုံး upload တင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်5သို့ 10 ဗီဒီယိုမိနစ်. ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြော်ငြာနှင့်အတူ, သင်အသုံးပြုနေတဲ့တစ်ဦးခေါင်းစဉ်ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မည် 25 ဇာတ်ကောင်. ထိုသို့၏တူညီသော link ကိုဖော်ပြချက်န့်သတ်ချက်ရှိပါတယ် 30 ဇာတ်ကောင်.
သင်တစ်ဦးစျေးဝယ်က်ဘ်ဆိုက်ရှိပါက, ထို့နောက် Facebook ကိုဝိုင်းလေးကိုကြော်ငြာသင်အသုံးပြုနိုငျသောစုံလငျခွငျးပုံစံများမှာ. သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်တည်ထောင်ရန်ချင်ရင်တောင်, ထို့နောက် အကယ်. သင်ဤကြော်ငြာပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါဟာဝယ်ဖို့အသုံးပြုသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် key ကိုအသေးစိတျကိုပြသနေတဲ့ကြီးမြတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါကပုံစံအားလုံးဝိုင်းလေးကြော်ငြာနေရာချထားမှုကိုများအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်ပုံရိပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်. အဖြစ်ကောင်းစွာသင်တကယ်တော့သိကြရမည်ဖြစ်သည်အဖြစ်, Facebook အဝိုင်းလေးကြော်ငြာတွေခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောကြော်ငြာအမျိုးအစားများရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း. ဤကြော်ငြာများမျိုးရှိပါတယ်:
Facebook မှာ Feed (ပုံရိပ်နှင့်ဗီဒီယို)
Facebook မှာပရိသတ်ကွန်ယက် Native, နဖူးစည်းစာတန်းနှင့် Interstitial
messenger ကို Inbox ထဲမှာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, နေပါစေသင်ရွေးချယ်သွားကြသည်ကြော်ငြာပုံစံဘယ်လို. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင် Facebook ကကြော်ငြာအရွယ်အစားရှိပါတယ်. facebook ကိုကြော်ငြာဓာတ်ပုံရိုက်, သင့်ရဲ့ image ကိုတစ် width နဲ့ height ရှိရမည် 600 pixels ကို (အနည်းဆုံး 254 x က 133 Messenger ကိုနေအိမ် Carousel ကြော်ငြာများအတွက် pixels ကို). အဖြစ်အကြံပြု image ကိုရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်သင့် 1080 x က 1080 pixels ကို. ထို့အပြင်, ဝိုင်းလေးကြော်ငြာတွေများအတွက်သင်အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိရှိရမည်2ကတ်များနှင့်သင်မှတက်ကိုသုံးနိုင်သည် 10 ကြော်ငြာနှုန်းကတ်များ. လည်း, အကြံပြုထားတဲ့ image ကိုရိက္ခာဖြစ်သင့် 1:1. အများဆုံးပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစား 30MB အထိဖြစ်ပါသည်. အဖြစ်ကောင်းစွာသင် JPG နှင့် PNG အတွက် image ကိုကို formats upload တင်လို့ရပါတယ်အဖြစ်. Plus အား, ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ 20% စာသားကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပျက်ကွက်ပေးပို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်.
ကိုယ့်အမှု၌သင်သည်သင်၏ Facebook ကို Carousel ကြော်ငြာတွေများအတွက်ဗီဒီယို upload တင်မယ့်နေလျှင်. ထိုအခါသင်သည်ပိုကောင်းသည်ဤဗီဒီယိုအားလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာ:
ဗီဒီယို၏အကြံပြု resolution ကိုဖြစ်သင့် 1080 x က 1080 အနည်းဆုံး. ကြောင်းနှင့်အတူ, သင်အသုံးပြုရန်ရှိသည်2ကတ်များနှင့်သင်မှတက်ကိုသုံးနိုင်သည် 10 Carousel ကြော်ငြာနှုန်းကတ်များ. အဆိုပါအကြံပြုသောဗီဒီယိုကို formats များမှာ .mp4 နှင့် .MOV. အဖြစ်ကောင်းစွာသင် 4GB မှဗီဒီယိုများတက် upload တင်လို့ရပါတယ်အဖြစ်. ထိုအခါအရှည်အကြောင်းကိုဖြစ်သင့် 240 မိနစ်များ. အဖြစ်ဗီဒီယိုတစ်ကားကို thumbnail ကိုအောင်နေချိန်မှာထက်လျော့နည်းသုံးစွဲဖို့သေချာအောင် 20% စာသားမ. အခြားသူကပျက်ကွက်ပေးပို့များ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်.
လည်း, ဇာတ်ကောင်န့်သတ်ချက်အကြောင်း 125 ဇာတ်ကောင်. သင်တစ်ဦး link ကိုပို့စ်တင်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်သင့် 40 ဇာတ်ကောင်. တစ် link ကိုဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ 20 ဇာတ်ကောင်.
လည်းအတော်လေးရေပန်းစား Facebook မှာညာဘက်ကော်လံကြော်ငြာတွေ. ထိုအလုနီးပါးတိုင်းက Facebook သည်အသုံးပြုသူများဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြော်ငြာတွေအဘို့အကြောင်းကိုငါသိ၏. သို့သျောလညျး, သာ Desktop ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းနေချိန်မှာကြော်ငြာတွေဤအမျိုးအစားများကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဆောင်. ဒါပေမယ့်သင်က data တွေကိုယုံကြည်လျှင်. ထိုအခါသူတို့ကအမြင့်ဆုံး CPC ရှိ (ကလစ်နှိပ်နှုန်းကုန်ကျစရိတ်) အခြားအ Facebook ကကြော်ငြာအမျိုးအစားများအကြား.
ဒါကြောင့်အမှု၌သငျအခြို့သော Facebook ကိုညာဘက်ကော်လံကြော်ငြာတွေ run ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လျှင်. ထို့နောက် Facebook ကကြော်ငြာအတွက်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားအနေနဲ့ပုံရိပ်ကိုအတိုင်းအတာရှိသင့် 1200 x က 628 pixels ကို. နိမ့်ဆုံး width နဲ့များ၏အမြင့်တို့နှင့်အတူ 600 pixels ကို. အဖြစ်အကြံပြုအချိုးအကြားဖြစ်သင့်တယ် 9:16 သို့ 16:9. သင်တစ်ဦး link ကိုအသုံးပြုမယ့်လျှင်အမှု၌ပြီးတော့ဒါဟာလဲဖြစ်သင့် 1.91:1. အဆိုပါအကြံပြု image ကို format တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ထုံးစံအတိုင်း, တူညီသော JPG နှင့် PNG.
လည်း, ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူသင်တို့အားသတိရရမယ် 20% စာသားကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပျက်ကွက်ပေးပို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်. ကြော်ငြာ၏ဇာတ်ကောင်န့်သတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်သင့် 125 ဇာတ်ကောင်. တစ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ 25 ဇာတ်ကောင်. နှင့် link တစ်ခုဖော်ပြချက် 30 ဇာတ်ကောင်.
အမှု၌သင်တို့ကို In-stream ကိုဗွီဒီယိုကြော်ငြာများ Facebook ကို run ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်လျှင်. တဖန်ငါကဗီဒီယိုလမ်းညွှန်ချက်များအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့. ဒါဟာထွက်ရှိလည်းအကောင်းဆုံး Facebook ကကြော်ငြာကို formats တစ်ခုဖြစ်တယ်. သို့သျောလညျး, ကြော်ငြာတွေဤအမျိုးအစားများကိုပုံမှန်အစာကျွေးခြင်းကြော်ငြာများမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားကြသည်. ထိုကြော်ငြာများများ၏ကြာချိန်ခန့်သာဖြစ်သကဲ့သို့5သို့ 15 စက္ကန့်. အဆိုပါ CPC မဟာဗျူဟာအရ, ထိုကြော်ငြာများများ၏ပျမ်းမျှနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. များမှာ 90% နှင့်ပြီးစီးအမြင်မှုနှုန်းအကြောင်း 70%. ဒါဟာမြန်ဆန်တော်တော်များများအသုံးဝင်သောင်.
ဒီတော့ဒီကြော်ငြာတွေကိုမဆို run ဖို့, သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံး resolution နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကို upload လုပ်ဖို့ရှိသည်. ဗီဒီယိုအချိုးသည်အကြံပြုရှုထောင့်ရှိကြောင်းသေချာပါစေ 16:9 (အချိုးအကြားလဲကျ 9:16 သို့ 16:9). လည်း, အကြံပြုသည့်ဗီဒီယိုကို formats များမှာ .mp4 နှင့် .MOV. ရုံကအခြားဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကဲ့သို့သင်တို့ဗီဒီယိုတစ်ကားမှတက်သုံးနိုင် upload တင်လို့ရပါတယ်4GB အထိ. လည်း, ဗီဒီယို၏အများဆုံးအရှည်အကြောင်းကိုဖြစ်သင့်5သို့ 15 စက္ကန့်. လည်း, သငျသညျအထဲတွင်သင်၏ video အသံတော်မူကြောင်းကိုသေချာစေပါရန်လိုအပ်ပါတယ်.
Plus အား, သငျသညျစာတန်းများကို add လိုသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်မှတက်က. သို့သော်ထိုသို့အကြံပြုသည်. အဖြစ်ကောင်းစွာသင်နှင့်အတူဗီဒီယိုပုံငယ်များသတိရရမယ်အဖြစ် 20% စာသားကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပျက်ကွက်ပေးပို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်.
နောက်တစ်ခု, အဆိုပါ Facebook ကိုလက်ငင်းအပိုဒ်ကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်. သငျသညျ Facebook ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းမြှင့်တင်ရန်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်. ထိုအခါဤသူသည်သင်တို့ကို run နိုင်မကြော်ငြာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးမျိုး. ထိုကြော်ငြာများရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကလျင်မြန်စွာဝန်သည်နှင့်သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့ခွင့်ပြုကြောင်း. အဖြစ်ကောင်းစွာကြော်ငြာရှင်များဆောင်းပါးတွေအတွင်းကြော်ငြာများကိုထားပါကထို option ရှိသည်အဖြစ်. လည်း, ကပုံရိပ်နှင့်ဗီဒီယိုကို formats ထောက်ခံပါသည်.
ကြော်ငြာတွေဤမျိုးများအတွက်, သငျသညျတခု resolution နဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုအားအသုံးပြုရပါမည် 1,200 x က 628 pixels ကို. လည်း, ပုံရဲ့နိမ့်ဆုံး width နဲ့ height အကြောင်းကိုဖြစ်သင့် 600 pixels ကို. အဆိုပါအကြံပြုအချိုးအကြားဖြစ်ပါသည် 9:16 သို့ 16:9. လည်း, လင့်များများအတွက်, အဆိုပါအချိုးအကြောင်း 1.91:1. ကိုယ့်ကိုအခြားကြော်ငြာကဲ့သို့အကြံပြု image ကို format နဲ့ JPG နှင့် PNG ဖြစ်ပါသည်.
ဗီဒီယိုအကြောင်းပြောနေတာ, သငျသညျပိုကောင်းတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံး resolution နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကို upload. အဖြစ်အကြံပြုအချိုးအကြားဖြစ်ပါသည် 9:16 သို့ 16:9. သငျသညျ .mp4 နှင့် .MOV format နဲ့သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများ upload တင်လို့ရပါတယ်. And you can upload up to 4GB sized videos. The maximum video length should be about 240 မိနစ်များ.
Along with that if you are postingalink. Then the link should haveaheadline with 25 ဇာတ်ကောင်. As well as the link description should be about 30 ဇာတ်ကောင်.
Facebook က Marketplace ကြော်ငြာတွေ
နောက်တစ်ခု, there are the Facebook Marketplace ads. It is also one of the most used ad formats. Even it isanew addition to Facebook’s ads formats. ထို့ကြောင့်, there are not too many people who are well aware of it. သို့သော်, not to worry. Let me tell you about it, so you can getaclear idea.
The required image for facebook marketplace is about 1,200 x က 628 pixels ကို. ကြောင်းနှင့်အတူ, ထိုသို့နိမ့်ဆုံး width နဲ့ height ရှိရမည် 600 pixels ကို. ပုံရဲ့လိုအပ်ရှုထောင့်ရိက္ခာများအကြားဖြစ်သင့်တယ် 9:16 သို့ 16:9.
အဖြစ်ကဗွီဒီယိုကြော်ငြာများမှကြွလာသောအခါ. သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံး resolution နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကို upload လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျ 4GB အရွယ်အစားကိုဗီဒီယိုမှတက် upload တင်လို့ရပါတယ်. Plus အား, ဗီဒီယိုတစ်ခုအချိုးရှိသင့် 9:16 သို့ 16:9. ကြောင်းအပြင်, ဗီဒီယို Format ကို about.MP4 နှင့် .MOV ဖြစ်သင့်. လည်း, ဗီဒီယို၏အရှည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဖြစ်သင့် 240 မိနစ်များ.
သငျသညျပြီးသားသင်သည်လည်း Facebook မှာ Messenger ကိုအပေါ်ကြော်ငြာများကိုထားပါနိုငျကွောငျးကိုသိသည့်အတိုင်း. သို့သျောလညျး, ဤကြော်ငြာကိုသာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်. ဤကြော်ငြာများများသောအားဖြင့်ပုံစံများအကြားပေါ်လာ, နှင့်ကြော်ငြာပုံစံပုံရိပ်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်. ဒီတော့မေးခွန်းကိုဘာစံမိုဘိုင်းကြော်ငြာအရွယ်အစားအကြောင်း? ကောင်းပြီဤနေရာတွင်ကြောင်းများအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်:
ပုံရဲ့အကြံပြု resolution ကိုအကြောင်းကိုဖြစ်သင့် 1,200 x က 628 pixels ကို. As well as it must haveawidth of 254 pixels along withaheight of 133 pixels ကို. the recommended aspect ratio is between 9:16 သို့ 16:9. လည်း, you have to upload images in JPG and PNG format. Make sure to fewer texts too.
The minimum width and height of the image should be about 600 pixels ကို. As well as the recommended ratio should be about 1:1 for square and 16:9 for landscape images. The maximum upload size for images is 30MB. The recommended image formats are JPG and PNG. As well as make sure to use images with 20% စာသားသို့မဟုတ်ထက်လျော့နည်း.
As far as the video guidelines are concerned, you better uploadavideo witharecommended resolution of about 1200 x က 628 pixels ကို. As well as the video formats should be MP4 o4 MOV. The maximum video upload size is 4GB. And it supportsavideo length of 120 မိနစ်များ. သို့သျောလညျး, it is recommended to uploadavideo which is less than2မိနစ်များ. The video thumbnail should have 20% စာသားသို့မဟုတ်ထက်လျော့နည်း.
So far, I have mentioned almost all kind of Facebook ads that are available out there. There are alsoafew other kinds of ads that Facebook has and all of them requiresadifferent kind of image dimensions. သို့သျောလညျး, to know all kind of information related to Facebook ads I would recommend you to check out Facebook’s help center for ads.
After all, who will know better about Facebook ads apart from Facebook itself. The guide contains everything that will help you to get started. လည်း, if you areabeginner, then you must check out the guide. You can access the guide from this link: https://www.facebook.com/business/help/1767727736592827
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, now go ahead and try creating some images by keeping all the guidelines in mind and see if they are working for you or not. ကြောင်းအပြင်, သငျသညျမေးရန်မဆိုပိုပြီးမေးခွန်းများကိုရှိပါက. Then do feel free to comment below and I will surely help you out.
ဇွန်လ 2, 2019
Hi there it’s me, I am also visiting this site daily, ဤ
ဇွန်လ 8, 2019
ဝဘ်. Disgrace on Google for now not positioning this put up
higher! Come on over and consult with my site . ကြေးဇူးတငျစကား
ဇွန်လ 9, 2019
ဟယ်လို! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
ဇွန်လ 10, 2019
bookmark လုပ်ထားတဲ့!!, I like your site!
ဇူလိုင်လ 3, 2019